पायल्स निको पार्ने घरेलु विधि थाहा पाउनुस् - Dainik Online Dainik Online
पायल्स निको पार्ने घरेलु विधि थाहा पाउनुस्
प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७७, सोमबार ९ : ४०
के तपाई पायल्सको समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ । यो, निकै कष्टकर समस्या हो ।
गलत खानपान र जीवनशैलीले निम्त्याउने यो समस्याबाट धेरैजना ग्रसित हुन्छन् । तर, लाजको कारण रोग लुकाउँछन् । जबसम्म समस्याले जटिल रुप लिदैन, तबसम्म उपचार खोजिदैन ।
२. सुन्निएका नसाहरु मल त्याग गर्दा बाहिर आउने, दिसा गरिसकेपछि पुन आफ्नै स्थानमा जाने ।
४. सुन्निएको नशाका डल्लाहरु निरन्तर मलद्वार बाहिर नै रहने ।
मलाशयमा भारीपन हुने, दिसा खलास नहुने, दुख्ने जस्ता सुरुवाती लक्षण हुन् । जति जति रोग बढ्दै जान्छ, उत्तिनै दुखाई बढी हुन्छ । गुद्वारमा मासुको डल्ला निस्कने, त्यसमा चिलाउने हुन्छ ।